Bandhigga Guangzhou wuxuu ku dhammaaday si guul ah, oo caannimada TCN waxay gaadhay heer sare oo cusub - TCN
Bandhigga Guangzhou wuxuu ku dhammaaday si guul ah, oo caannimada TCN waxay gaadhay heer sare
2018 China (Guangzhou) Bandhigga Iskiis u adeegsiga matoorada ayaa soo gabagaboobay
Intii lagu gudajiray bandhiga, goobta ayaa waxaa buux dhaafiyay dad, munaasabaduna waxay ahayd mid aan horay loo arag!
TCN waxay soo bandhigtay dhowr mashiinno culus oo culus bandhigga.
Bixinta isha warshadaha aan duuliyaha lahayn
Tiknoolojiyad madow maxay si gaar ah loo soo bandhigay?
Miyaan aadi karin goobta oo seegi kartaa waxa cajiibka ah?
Ha ka welwelin
TCN waxay kaa qaadeysaa inaad soo bandhigto sirta shirka
Digniinta Tamarta sareysa
Mashiinka iibinta ee aan duuliyaha lahayn
Maalintii la bilaabay, bannaanka TCN waxaa ka buuxay marti-sharaf, dadweynahiina way caan ahaayeen. Dadka ka socda qaybaha kala duwan ee nolosha waxay u yimaadeen inay arkaan mashiinka TCN.
TCN waxay la socotaa isbeddelka xilliyada waxayna ku bixisaa lacag aad u fara badan sidii ay ugu soo saari laheyd alaabo cusub iibka aan la xukumin, taas oo ay macaamiisha si weyn ugu amaaneen gudaha iyo dibadaba.
Qayb ka mid ah bandhigga bandhigga
TCN Alaabooyin cusub oo aan lala socon oo leh walaac gaar ah
Nidaam cusub oo suuq geyn ah oo ganacsi O2O ah oo dib u qeexaya nidaamka wiishka iyo xoogga dukaanka aan la adeegsan. Soo jiidashada tikniyoolajiyadda cusub ee madow waa mid aan la joojin karin, fiiri caankan
Mashiin iibsi badeecad cusub oo si gaar ah uga walaacsan qaboojiyaha TCN iyo kuleylka
Goobta Shirka Wax Soosaarka Cusub
Mustaqbalka Sumcadda Tafaariiqda Madasha Shirka
Madasha shirarku way buuxiyeen oo way buuxiyeen.
TCN waxaa ku jira saddex abaalmarinno
C TCN waxay ku guuleysatay Abaalmarinta Suuqa Horumarinta Suuqa ee APVA ee 2017 (ka labaad dhanka midig)
C TCN waxay ku guuleysatay Abaalmarinta APVA ee 2017 ee heer sare ah (midigta koowaad)
Industry 2017 APVA 15 sano warshadaha waxay leeyihiin dadka ugu saameynta badan
Thanks to taageerada iyo aaminaada macaamiisheena, iyo xaqiijinta warshadaha ee TCN. Mustaqbalka, TCN waxay sameyn doontaa dadaal kasta oo lagu horumarinayo heerar sarreeya oo mashiinnada wax lagu iibiyo laguna abuuro qiimo weyn bulshada.
HORETCN Alaabada cusub ayaa si la yaab leh u siidaayay, Ku raaxayso mashiinka iibka tikniyoolajiyadda aan duuliyaha lahayn
NEXT Marka mashiinka wax iibintu soo galaan weelka wax lagu cuno?